On 10/31/2017 (IST)
Sanadkii 2008 ilaa iyo waqtiga iminka lagu jiro waxaa laga maqlaa warbaahinta aduunka lacagahan cusub ee loo yaqaan DIGITAL MONEY ama CRYPTO CURRECY oo qaabka loo abuuray iyo cida ka dambeysa aan weli la ogayn,waa lacag VIRTUAL ah oo aan la arki karin ,la taaban karin,la urin karin isla markaana ah xisaabaadka loo yaqaan DIGITAL. DIGITAL CURRENCY waxay u kala baxdaa dhow boqol oo kala nooc ah,kan ugu caansan waa BITCOIN oo uu alifay shaqsi la yiraahdo SATOSHI NAKAMOTO oo ilaa iminka aan la aqoon qofka uu yahay iyo meesha uu ku nool yahay.
Lacagaha VIRTUAL CURRENCY mar walba waa VOLATILE oo micnaheedu yahay wax walba ka filo,qaabka BitCoin iminka ay ku sosocto waa XAWAARE aad u dheereeya!, malaga yaabaa in 1 mar dhulka ku soo dhacdo? TABCAN VOLATILE micnaheedu waa taa, lacagta ma marta nooca BANKING SYSTEM, dowlad ma xukunto sidaa awgeed marwalba RISK ama HALIS way jirtaa, cabsida ugu weyn waa in dowlada Mareykanka ay arimaha DIGITAL CURRENCY gacmaha la soo gasho.
Su'aalo aad u farabadan ayaa marwalba la soo weydiiyaa shabakada SolaPortal, si aan uga jawaabno kuwa muhiimka ah, waxan diyaarinay VIDEO aad ku daawan doontaan qaabka ugu fudud ee loo fahmi karo noocyada muhiimka ah ee CRYPTO CURRENCY.
Si aan uga jawaabno su'aalaha kale ee ka iman kara DIGITAL CURRENCY, waxaan hoos ku diyaarinay su'aalo iyo jawaabo is wata.
Question 1 - Waa maxay qodoshada BitCoin ama BitCoin mining?
Answer 2 - Qodashada magac ahaan waxay ka timid qaabka loo qoto Dahabka iyo dhagaxaanta qaaliga ah,BitCoinka wuxuu kaga duwan yahay waa nooc DIGITAL ah,qaabka loo qoto waa iyadoo laysku xiro computero quwadoodu ay aad u weyn tahay oo 24 saac shaqeeynaya isla markaana isticmaala tamar ama koronto aad u farabadan, waxay isticmaalaan nooc xisaabaadka muhiimka ah ee la yiraahdo ALGORITHMIC iyo nooc kale oo la yiraahdo HASH, beeraha DIGITALKA ah ee laga qodo waxaa tartan xisaabaad ku jira computerada isku xiran ee awooda badan, markii ay u suuroowdo in xisaabaadka adag ay computerada soo saaraan shaqsiga ama shirkada iska leh beertaq DIGITALKA ah waxay gacanta u soo gelaya COINKII ama lacagtii oo ah qaab xisaab DIGITAL ah, qaabka loo xaqiijiyo in nambarada ay yihiin kuwa sax ah waa in la maraa xisaabaadak nooca BLOCKCHAIN oo xaqiijisa isla markaan gelisa NETWORKGA lagu kala iibsado.
Sawirka hoose waa BEER laga qoto BitCoinka dibada iyo gudaha!
Question2- Qaabkee loo iibsan karaa BitCoin?
Answer 2 - BitCoin waxaa laga iibsan karaa meelo kala duwan, marwalba waxay ku xiran tahay sida aad u aamini kartid shaqsiga ama shirkada aad is leedahay waad ka gadan kartaa, ONLINE waa laga iibsan karaa hadii shabakada ay tahay mid la aamini karo, qaabka lacagta aad ugu diri kartid waa in ay ahaataa CREDIT CARD,CASHA ama DEBIT CARD, qaabka loo iibsado iyo in aad iska ilaalisad in lagu dhaco waxay la mid tahay sida ganacsiga Bangiyada oo kale, mar walba isticmaala BROKER ama shaqsi aad taqaanid oo dhexdiina ku jira si lacagtaada aan u lumin.
Question 3 - Waa maxay Double-Spending?
Answer3- Double-Spendig waa nooc laysku dayo oo ah in 1 COIN laba jeer la isticmaalo!, waxaa xusuus mudan in 21 MALYUUN oo BitCoin ah keliya ay jiri doonta, saa awgeed NETWORKGA wuxuu xooga saaraa sidii loo ilaalin lahaa in NAMABARADA BitCoinka si qalad loo isticmaalo, waxay isticmaalaan xaqiijin ah in COIN hal mar la isticmaalin aan markale la isticmaalin karin, BLOCKCHAINKA ayaa waxay xooga saartaa in aanu dhicin arin noocaa ah iyagoo isticmaalaya Tiknooliji aad u adag.
Question 4 - Kuwee ugu muhiimsan Crypto Currency?
Answer 4 - Sidaan ku soo sheegnay bilowga qoraalka, waxaa jira boqolaal DIGITAL CURRENCY ah oo kala duwan, qaarkood qiimo sidaa ah ma leh, kuwa iminka ugu muhiimsan waa: BITCOIN (BTC) - BITCOIN CASH (BCH) - BITCOIN GOLD (BTG) - ETHEREUM (ETH) - LITECOIN(LTC) - ZECASH/MONERO (ZEC/XMR) - IOTA (MIOTA) - RIPPLE (XRP).
Question 5 - Ma la xadi karaa DIGITAL CURRENCY?
Answer 5 - Tabcan 100%, Crypto Currency kama duwana Bangiyada iyo shirkadaha waaweyn ee aduunka oo maalin walba la dhaco iyadoo la isticmaalayo INTERNETKA, mar walba waxaa muhiim ah in aad adkeysid PASSWORDKA aad u isticmaashid iyo meesha aad ku keydisid, hadii PASSWORD fudud aad isticmaashid si fudud ayaa lagaaga jabsan karaa oo wixii lacag ah ee ku jira loola bixi karaa, SOLAPORTAL waxay marwalba ku dhiira gelisaa in aad isticmaashaan ACCOUNT aan INTERNETKA ku xirnayn oo ah USB OFFLINE.
Question 6 - Diintu maxay ka qabtaa CRYPTO CURRENCY, ma XALAAL baa?
Answer: 6 -VIRTUAL CURRENCY weli ma 10 jirsan laakiin qaabka ay aduunka ugu fiday waa mid ka yaabisay dhamaan dowladaha, hay'adaha ganacsiga iyo banuugta, saa awgeed waa in lays weydiiyaa SHAREECADA ISLAAMKA maxay ka qabtaa? qoraalo aad u farabadan ayaa laga diyaariyay oo ay ka mid yihiin kuwa hoose:
Question 7 - BitCoin hadii aan aan iibsado qaabkee u gedi karaa?
Answer 7 - Isla qaabkii aad u iibsatay oo ah in BROKER aad ka gadid, tusaale ahaan waa sida MONEY EXCHANGE oo GADA isla markaana iibsada, COINKA ayaad u xawileysaa isla mariiba BAN ACCOUNTIGAAGA ayaa lacagta si toos ah laguugu soo shubayaa, hadii aad doontid lacagta waxaad kala soo bixi kartaa ama aad gelin kartaa ATM/CASH POINT oo ah DERBIGA LACAGAHA!
Question 8 - BitCoin ma leeyahay KAARKA nooca Bangiyada?
Answer - 8 - HAA!
Waxaa loo isticmaalaa OFFLINE PAYMENTS iyo ATM
Waxaad loo isticmaalaa SECURE ONLINE PAYMENTS:
Question 9 - Qaabkuu u eg yahay ACCOUNTKA BitCoin?
Question 10 - Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaabka loo furto iyo sida uu shaqeeyo BitCoin ma heli karaa?
BITCOIN – BITCOIN CASH – BITCOIN GOLD – ETHEREUM Keliya Ayaan la shaqeynaa!
Waxa ugu horeeya oo oo loo baahan yahay waa in la furaa DIGITAL ACCOUNT oo loo yaqaan WALLET, OFFLINE oo USB ah ama ONLINE oo oo DIGITAL ah,waa meesha lacagtaada ay kuugu jiro doonto oo adiga aad maamuli doontid,waa sida BANK ACCOUNT oo kale oo mas'uuliyada adiga keligaa ay ku saaran tahay,waxaad kale oo aad furan kartaa CARD sida kuwa bangiga ah oo cinwaankaaga laguugu soo dirayo,waxay kala yihiin.
Kaararka dusha qarashkooda waa 30$ oo lagu dalbado iyo 40$ BOOSTADA XAQIIQADA ah laguugu soo diro,adiga ayaa si toos ah uga dhex dalbanaya xiliga laguu furo ACCOUNT.
NB: SolaBitCoin SI WAX WALBA AAN SAMEYNO WAXAAN CHARGE GAREYNAA $250 OO AH CONSULTANCY FEE.
Ka dib markii aad diyaar u tahay waxaa lagaa iibinayaa lacagta DIGITAL COINKA, hadii aad doontid waxaad u isticmaali kartaa sida iibisiga tikitka diyaarada,dalxiiska,Hoteelada iwm.
Lacagtu waa VOLATILE oo micnaheeda yahay isbedel marwalba waa dhici kartaa,waxa ugu fiican waa MAAL GELIN ama INVESTIMENT.
Iibso dhowr bilood ka dibna sii iibi markii faa;iido aad ka heshid.
Taariikhda CRYPTOCURRENCY oo bilaabatay 2008, weli lama sheegin qof ku QASAARAY.
SolaBitCoin waxay ka caawisaa macaamiisha sidii ay u fahmi lahaayeen qaabka ay u shaqeyso isla markaa looga faa'iido.
SolaBitCoin iyo Abdinasir Ismail MARNABA MAS'UULIYAD DHANKA FAA'IIDADA IYO QASAARAHA DIGITAL CURRENCY MA QAADAAN.
SolaBitCoin wuxuu kaa caawin doonaa tababar dhanka VIDEO iyo QORAAL ah oo la xiriira CRYPTOCURRENCY
Xiriirka ugu wanaagsan waa BY EMAIL,waayo cod iyo qoraal mobile way lumi karaan:
VIDEO Ayaan ka diyaarinay oo su’aalo farabadan ka jawaabaya:
Qaabka xiriirka waa solabitcoin@gmail.com - Tel: 07495 328463